Kukho amaxesha apho abathengi bethu bacela uthelekiso-lwecala ngecala lezinto zephepha phakathi kwamaphepha ewebhu ukubona ukuba ulwakhiwo lwephepha lunokuba nefuthe kubume babo kwigama elinikiweyo okanye ibinzana. Yinkqubo entle ekhathazayo iyodwa. Sisebenzisa izixhobo ezinje Ukukhwaza uFrog ukukhasa isiza kunye nokufaka iinkcukacha.
esinye isithuba esihle Doug.. Bendinexesha elimnandi lokufunda umsebenzi wakho.. Enkosi ngokwabelana…
NgoJulayi 12, 2013 ngo-12:42 PM
Ndiye ndaphawula enye yezithuba zakho ngaphambili kwaye ndikhankanye apho i-ColibriTool - ngoku ndicinga ukuba le yeyona ndawo ifanelekileyo yokwenza oku 🙂 Ndiye ndaqaphela ukuba kwiphepha le-seo yinto enkulu kwizixhobo ze-seo ngoku. Ndisebenzisa i-Colibri kwaye ndaneliseke ngokwenene kodwa kufuneka nditsho ukuba undiqinisekisile ukuba ndizame i-Ninjas, ivakala kakuhle. Enkosi!